Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Natiijada Doorashadii Kenya & guusha Uhuru Kenyatta.
Faallo: Natiijada Doorashadii Kenya & guusha Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa soo dhaweeyey natiijada codbixintii ku celiska ahayd ee doorashada Madaxweynaha oo ay ku dhawaaqeen Guddiga Doorashooyinka isniintii shalay ahayd.
Guddiga Doorashada ayaa sheegay in codbixinta ay ka dhacday 265 degmo oo kamid ah 290 degmood ee la qorsheeyey inay codbixinta ka dhacdo. 25 degmo ayeysan ka dhicin wax codbixin ah kadib markii mucaaridka ku dhawaaqeen inay isaga baxeen doorashada iyagoo ka gadoodsan qaabka loo maareeyey.
Degmooyinka aysan doorashada ka dhicin ayaa waxaa kamid ah dhulka ay mucaaridka ku xoogan yihiin sida; Kisumu, Siaya, Homa Bay iyo Migori. Codbixinta goobahaasi ayaa dib loo dhigay kadib cabsi dhanka amaanka ah.
Wuxuu guddiga sheegay in natiijada guud aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin goobaha kooban aysan codbixinta ka dhicin weli ama dib loo dhigay. Codbixintii khamiistii dhacday ayaa waxaa hadheeyay banaanbaxyo rabshado wata oo ay ku dhinteen dad gaaraya 8 qof, halka ay ku dhaawacmeen 30 kale. Waxaana jiray dad badan oo aan codkooda dhiiban.
Natiijada codbixinta oo ay guddiga shalay shaaciyeen ayaa lagu xusay in dadka codka dhiibtay ay ka badan yihiin 7.6 milyan oo qof oo kamid ah 19ka milyan ee u diiwaangashan inay codka dhiibtaan. Taasi oo muujineysa in 38% dadka diiwaanka gashanaa ay codkooda dhiibteen.
Tiradan ayaa aad uga yar tirada dadkii codkooda dhiibtay doorashadii la qabtay 8dii Agoosto oo la sheegtay inay codkooda dhiibteen in ka badan 80% dadka diiwaangashan. Codbixintaasi oo uu ku guuleystay 54% cododka Uhuru Kenyatta, waxaana natiijadaasi laalay Maxkamada sare oo amartay doorashadan kuceliska ah.
Madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta ayaa markale ku guuleystay codbixinta kuceliska ah isagoo helay in ka badan 98% cododka, maadaama mucaaridka ay qaadaceen inay codkooda dhiibtaan. Waxaa iyaguna jiray lix murashax oo kale kuwaasi ayaa helay codod aad u yar.
Hoos u dhaca ku yimid tirada dadka codka dhiibtay ayaa loo aaneenayaa sadex arrin oo kala ah:
1- Diidmada codbixintan ee Mucaaridka uu hogaamiyo Raila Odinga
2- Taageerayaal badan ee Uhuru oo guryahooda iska joogay markay ogaadeen in Odinga uu tartanka ka haray
3- Cabsida dhanka amaanka iyo waliba daalka shacabka Kenya oo si weyn u dhibsaday doorashadan dabadheeraatay.
Maanta oo Talaado ah ayaa lagu wadaa in uu shacabka la hadlo Hogaamiyaha Isbaheysiga Mucaaridka NASA ee Raila Odinga oo dhankooda sheegi doona waxa uu hada noqon doono qorshahooda.
Mucaaridka ayaa la filayaa inay ay ku doodi doonaan in tirada codka bixisay doorashada ku celiska ah ay tahay mid aad u yar taasina aysan awood buuxda u siineyn Madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu kaligiis maamulo dalka, waxaa dhici karta inay ku baaqaan in la dhiso Xukuumad KMG ah oo Midnimo Qaran oo ay iyaguna qeyb ka yihiin, si loo soo diyaariyo doorasho cusub oo xalaal ah.
Raila Odinga ayaa horey u sheegay inay isbaheysigooda kusoo dareen laan cusub oo qaabilsanaan doonta kacdoonka ka dhanka ah maamulka Uhuru Kenyatta. Xisbi Xaakimka Jubilee ee uu hogaamiyo Kenyatta ayaa ku tilmaamay kacdoonka uu ku baaqay Raila Odinga mid amniga wax u dhimeysa isla markaana u muuqata Jamhad cusub oo ka dhex dhalatay dalka Kenya.
Isbaheysiga Mucaaridka ayaa diiday inay dib uga noqdaan go’aankii ay ku qaadaceen doorashada kuceliska ah kadib markii laga diiday in loo fuliyo codsiyadooda oo ahaa in la bedalo guddiga doorashada iyo shirkadaha qandaraaska loo siiyey inay fududeeyaan hawlaha codbixinta oo ay ku eedeeyeen inay dhamaantood musuq maasuq sameeyeen oo ay u xaglinayaan Madaxweynaha xilka haya.